> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Kingston SSD Data Recovery
Enwere m ike Naghachi faịlụ site Kingston SSD?
M nwere 120GB Kingston SSDNow SSD. Na m nwere ọtụtụ dị mkpa faịlụ na ya. M nnọọ formatted na mberede n'ihi na m chọrọ iji bụ dị ka a usoro mbanye. Ugbu a m niile dị mkpa faịlụ na-efu na m na-adịghị ọbụna nwere ndabere. M mkpa n'ezie iji weghachite ha. Biko nyere m aka!
SSD bụ kasị ọtụtụ anụ nchekwa na ngwaọrụ na-enyere aka na-echekwa niile ụdị faịlụ. Kingston SSD bụ otu n'ime ndị kasị ama ụdị na ahịa. Otú ọ dị, faịlụ ka nwere ike ga-efu gị Kingston SSD n'ihi nhichapụ, SSD formatting, virus agha na ọbụna na-ezighị ezi na ime ihe. Otu eziokwu banyere furu efu faịlụ gị Kingston SSD bụ na ha ka na-ebe tupu a overwritten site ọhụrụ data. Mgbe ihu nke a ụdị nke, Kingston SSD data mgbake ngwọta na-mkpa.
E nwere nnukwu ego Kingston SDD data mgbake omume na Internet. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ nnọọ otu nke kasị mma n'etiti ha. Nke a dị ike ịba uru naputa data si Kingston SSD na ihe pụrụ iche na mfe na mma-ụzọ. Site ịgụ isiokwu gị Kingston SSD na ya, i nwere ike effortlessly weghachite gị niile furu efu faịlụ, gụnyere foto, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ na ndị ọzọ.
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery iji weghachite data si Kingston SSD ugbu a.
Igosi Kingston SSD Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Aga m na-egosi gị otú ị naghachi data si Kingston SSD na Wondershare Data Recovery maka Windows. Mac ọrụ pụrụ ịgbaso ndu na Mac version kwa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite Kingston SSD data mgbake.
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị ga-enweta ihe interface na 3 mgbake ụzọ. I nwere ike ịgụ ntuziaka nke ha nke ọma iji họrọ kacha adabara otu maka gị.
Ebe a, anyị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Biko adịghị wụnye ihe omume na gị Kingston SSD.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Kingston SSD
Ebe a ị dị nnọọ mkpa họrọ gị Kingston SSD na pịa "Malite" button ka usoro ihe omume ike iṅomi ya.
Ọ bụrụ na faịlụ gị Kingston SSD na-efu n'ihi formatting, ị ga mma họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na Kingston SSD
The hụrụ data na gị Kingston SSD ga-egosipụta na mmemme mgbe ịgụ isiokwu. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naputa na iti on "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Cheta na: Unu ịzọpụta natara faịlụ azụ gị Kingston SSD ozugbo mgbe mgbake.